သနပ်ခါးမေ: Serum အကြောင်း သိသမျှ
By **~ မြတ်ကြည်~** 2:43 AM အသားအ​ရေ ထိန်းသိမ်းနည်း
အခုလတ်တလောမှာ Serum နဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးထားတာလေးတွေရှိတာမို့ Hello Magazine မှ All you ever wanted to know about serum ကို ကောက်နှုတ်တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ Serum နဲ့ပတ်သက်လို့ သိချင်တဲ့သူတွေ အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်။
Serum တွေဟာ အသားအရေ ထဲကို လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ စိမ့်ဝင်နိုင်ပြီး လိမ်းလိုက်ရင် မစေးကပ်ပဲ အရေပြား အောက်အလွှာများထိ ဖောက်ထွင်းနိုင်တဲ့ ဂုဏ်သတ္တိရှိပါတယ်။ Active ဖြစ်တဲ့ ingredients တွေကို concentration မြင့်မြင့်နဲ့ထည့်ထားတာပါ။
2. Active Ingredients??
တခြား အသားအရေထိန်းသိမ်းတဲ့ ပစ္စည်းတွေလို serum ပဲ တွေမှာ ဘာအတွက်ရည်ရွယ် ထုတ်ထားသလဲဆိုတာ မူတည်ပြီး အမျိုးအစားတွေ ကွဲပြားသွားပါတယ်။ ဥပမာ။ ။ အိုမင်းရင့်ရော်တာကာကွယ်တာ တို့၊ အသားဖြူစေတာတို့၊ ဝက်ခြံမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးတာတို့။
သူတို့ဆီမှာ အမျိုးအစားကို လိုက်ပြီး အာနိသင်ရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ပြင်းအားများများနဲ့ထည့်ထားကြပါတယ်။ အဲဒီနည်းနဲ့ လိုအပ်တဲ့ အာဟာရကို အရေပြား အလွှာတွေဆီ အစွမ်းကုန်ဖြည့်ဆည်းပေးပါတယ်။
Active ဖြစ်တဲ့ ingredients တွေကို concentration မြင့်မြင့်နဲ့ထည့်ထားတာကြောင့် တခြားရိုးရိုး skincare တွေထက်စာရင် အချိန်တိုအတွင်းမှာ ပြောင်းလဲမှုကို သိသိသာသာ မြင်တွေ့နိုင်မှာပါ။
4. Sensitive ဖြစ်တဲ့ အသားအရေ
တခါတလေ အာနိသင်ပြင်းပြင်းနဲ့ထည့်ထားတဲ့ အခါ sensitive ဖြစ်တဲ့ အသားအရေကို သွားပြီး ဆွ တတ်တာကြောင့် အသားအရေ နီမြန်းလာတာတို့၊ မတည့်တာတို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
စုတ်ယူတာ အကောင်းဆုံးရစေဖို့ မျက်နှာသစ်ပြီးချင်းချင်းမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှ မဟုတ်လည်း တခြား skincare တွေနဲ့ တွဲပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ မျက်နှာကို လိမ်းနေစဉ် နှိပ်နယ်ပေးတာ၊ ပိုပြီး စိမ့်ဝင်အားကောင်းစေပါတယ်။
Serum ကို ဘယ်အသက်အရွယ်မဆို အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
concentrations တွေကို သာမန်ထက် ၂ဆ နည်းပါး တင်ထားပြီး အချိန်တိုအတွင်းမှာ သိသာစေတာကြောင့် တခြား တွေထက်စာရင် ဈေးပိုကြီးတတ်ပါတယ်။
အဟီး ... မြတ်ကြည် နဲ့ မတည့်ပါဘူး။ ဟိုးအရင်တုန်းက La Mer လိမ်းဖူးတယ်။
အဲဒီတုန်းက မြတ်ကြည် ဝက်ခြံတော်တော်ထွက်နေတဲ့အချိန်။ အမေက သမီးလေး လှပါစေတော့ ဆိုပြီး ဝယ်လာတာ။ လိမ်းလိုက်မှ ဝက်ခြံတွေ ရောင်လာလို့ ရပ်လိုက်ရတယ်။ သူက oil-based မို့လို့ထင်တယ်။ အဲဒီကတည်းက မသုံးတော့တာ အခုထိပါပဲ။
မြတ်ကြည်နဲ့သာ အဆင်မပြေတာ၊ ပြေတဲ့သူတွေလည်း အများကြီးရှိမှာပါ။ အဲဒါကြောင့်လည်း လူတွေ ပါးစပ်ဖျားမှာ နာမည်ကြီးလာတာ နေမှာပေါ့နော်။ ဒီဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ပြီး ညီမလေး သဲအိစံ နဲ့ မေလင်းချို တို့ လည်း ကျေနပ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ :)
ဖြိုးဇာနည် September 12, 2012 at 9:34 AM
Sweety Snow September 13, 2012 at 12:55 AM
သိပ်မသုံးဖြစ်ဘူး.. ဒီလိုရေးတော့လည်း ဗဟုသုတအနေနဲ့ သိထားတော့ ကောင်းပါတယ် ..ဝေမျှတဲ့အတွက် ကျေးဇူးမြတ်ကြည်လေးရေ :)
ဆူဇီ September 13, 2012 at 11:52 PM
မမမြတ်ကြည် serum ကိုမျက်နှာသစ်ပြီးတာနဲ့လိမ်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ သူက Toner ခံစရာမလိုဘူးပေါ့နော်? တစ်ခါမှမသုံးဖူးဘူး
မြတ်ကြည် September 14, 2012 at 9:22 AM
တချို့ကတော့ တိုနာ၊ moisturizer ခံပြီး လိမ်းကြတယ် ညီမလေး။
khin yamone September 15, 2012 at 1:42 AM
ဗဟုသုတလည်းရ ကိုယ်နဲ့လည်းအဆင်ပြေတာလေး တွေရွေးချယ်လို့ရသွားတယ်..
ကျေးဇူးသမီးရေ..နောက်လည်းဒီ့ထက်ပိုပြီး အများကြီး ရေးနိုင်ပါစေ..
san htun September 28, 2012 at 5:42 PM
ဒါကြောင့် သူက ဈေးကြီးတာကိုး..သုံးတာသုံးနေပြီး သိဘူးရယ်..ခုတော့ သိသွားပြီ...
limsilaa November 4, 2012 at 6:47 AM
အမ အဆီပြန်တဲ့ သူတွေ night cream လိမ်းရင် ဝက်ခြံ ထွက်လား
Dutch Braid ကျစ်ဆံမြီး ပြောင်းပြန်
Korean cosmetics တွေကို သက်သက်သာသာ ဝယ်ယူနိုင်ဖို့
လွယ်လွယ်ကူကူ မျက်ရစ် ဖော်မယ်